တိုက်ရိုက်၊ ချစ်ခြင်း၊ ရယ်မောပါ Martech Zone
မိဘ၊ အလုပ်၊ ဆက်ဆံရေးစသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏သားနှင့်အတူကဗျာဆန်ဆန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘဝသည်သင်အဆင့်ဆင့်သို့ရောက်ရှိလာပြီးသင်ဘယ်တော့မှမလိုချင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန်သင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
အဆင့် ၁: အိမ်ထောင်ပြုခြင်း
လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ကွာရှင်းခဲ့သည်။ ငါ '' တနင်္ဂနွေ '' ဖခင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းဖြစ်ခြင်းကိုငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိရှာခဲ့ရတယ်။ ငါကလေးတွေမပါဘဲမနေနိုင်တော့တဲ့အတွက်ငါရွေးလိုက်တယ်။
ကွာရှင်းပြတ်စဲနေစဉ်မှာငါဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ ငါဟာဒေါသထွက်နေတဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်တော့မလား၊ သူမကိုသူမတရားရုံးထဲဆွဲခေါ်သွားတာ၊ သူ့အတိတ်ကိုသူ့ကလေးတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်တာ၊ ငါအမြင့်ဆုံးလမ်းကိုယူယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးဟောင်းနှင့်မကြာခဏစကားပြောနေဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့ရုန်းကန်နေရကြောင်းသူတို့သိသည့်အချိန်တွင်လည်းသူ့မိသားစုအတွက်ဆုတောင်းပေးသည်။ အမှန်တရားကဒီနည်းအားဖြင့်ဒီထက်အများကြီးစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်၊ ငါ့ကလေးတွေလည်းပိုကောင်းတယ်။
အဆင့် ၂: အလုပ်
ငါအလုပ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အလုပ်များစွာထက် ပို၍ လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော့်သူဌေးကကျွန်တော့်ကိုလိုချင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့ပဲ။ ငါကိုယ်တိုင်မပြည့်စုံသေးသောကြောင့်မကြာသေးမီကအခြားတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့သည်။ ငါကတစ်ခုပါ အခုစိတ်ကူးအလုပ် အဲဒါကနေ့တိုင်းငါ့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ ၁၀ နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုဒီနေရာမှာရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာလက်တွေ့ကျတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်သံသယများမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ရှားရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ် အမှုအရာတွေနှေးကွေးပြီးကုမ္ပဏီတွေကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာမရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အခါငါ (အတွင်းအပြင်အပြင်မှာ) ရှေ့ဆက်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အားသာချက်များကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များကိုစိတ်ပူမိသည်ထက်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်သောသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိမြင်ခဲ့သည်။
အဆင့် ၃: မိသားစု
ယခုကျွန်ုပ်အသက် ၄၀ နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချရမည့်ဘဝသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းကငါဟာ 'ငါ့ကိုဂုဏ်ယူ' တဲ့မိသားစုရှိဖို့စွမ်းအင်အများကြီးသုံးခဲ့တယ်။ နည်းလမ်းများစွာတွင်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ဟာအောင်မြင်မှုကိုအရင်ကထက်အများကြီးကွာခြားတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုကိုကျွန်ုပ်၏ကလေးများပျော်ရွှင်မှု၊ ခိုင်မာသည့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကွန်ယက်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်တွင်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ နာမည်၊ ကျော်ကြားမှုသို့မဟုတ်ကံကြမ္မာမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သူတို့ကမဟုတ်ခဲ့ဖူးဘူး။
ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှာလူများအားကျွန်ုပ်ကိုမြှင့်တင်မည့်အစားငါ့ကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါလေးစားတယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဆုတောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားဖို့စွမ်းအင်ကိုငါမသုံးတော့ဘူး။ ငါသူတို့ထင်မြင်ချက်မှာအောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ်။ ငါက ငါ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက်တာဝန်ရှိ သူတို့ကသူတို့အတွက်တာဝန်ကိုလက်ခံသင့်တယ်။
ဖခင်တစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စကားဝိုင်းများသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုများကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့စွမ်းရည်နဲ့မကိုက်ညီရင်ငါဟာကလေးတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သမီး၏အဆင့်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည် ငါထင်တာကတော့အများစုကသူမရဲ့လူမှုဘ ၀ ဟာသူမရဲ့ကျောင်းအလုပ်ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်။ သူမသည်သူမသူမ၏အဆင့်ရသည့်အခါဒါဟာသူမနာကျင်။ သူမသည်ပုံမှန်အားဖြင့် A / B ကျောင်းသားဖြစ်သောကြောင့်တစ်နေ့လုံးငိုခဲ့သည်။ သူမဘယ်လောက်စိတ်ပျက်မိလဲ၊
ကေတီသည်အတန်းတွင် ဦး ဆောင်သူကိုနှစ်သက်ပြီးအောက်ခြေတွင်ရှိရန်မုန်းတီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည် - စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သူငယ်ချင်းများမရှိ၊ မိတ်ကပ်မပါ မိတ်ကပ်ဟာခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ သူမမျက်လုံးတွေနဲ့ကျွန်တော့်ကိုတွင်းမီးတွေမီးရှို့တော့မယ်ထင်တယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲသူမရဲ့အဆင့်အတန်းပြန်လာခဲ့သည်။ သူမကျွန်တော့်ကိုတွင်းထဲမလောင်တော့ဘူး၊ နောက်တစ်နေ့မှာပဲကားပေါ်မှာငါ့ကိုရယ်တယ်။
၎င်းသည်ခက်ခဲသောမြင့်မားသောဝါယာကြိုးလုပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းအနုတ်လက္ခဏာကိုမဟုတ်ဘဲအပြုသဘောကိုအလေးထားရန်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေသည်။ သူတို့ကိုလှပတဲ့ပင်လယ်ဘက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​သူတို့နောက်ကွယ်ကမုန်တိုင်းအကြောင်းအမြဲတမ်းသတိမပေးတော့ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေလာသည်နှင့်အမျှသူတို့မည်သူဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုနှစ်သက်လာသည်။ သူတို့သည်နေ့တိုင်းငါ့ကိုအံ့သြမိန်းမောကြသည်။ ငါ့မှာမယုံနိုင်စရာကလေးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် 'သူတို့ဖြစ်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်' ဒါမှမဟုတ် 'သူတို့ဘယ်လိုပြုမူသင့်တယ်' ဆိုတဲ့အယူအဆမှားတွေမရှိဘူး။ သူတို့ကိုတွက်ဆဖို့ပါပဲ။ တကယ်လို့သူတို့ဟာသူတို့ဘဝ၊ သူတို့ဘဝရဲ့လမ်းညွှန်မှု၊ ငါနဲ့အတူပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ငါပျော်တယ်။ သူတို့ကိုငါသင်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ငါဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြခြင်းဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓက“ ငါ့ကိုမြင်သောသူသည်ငါဆုံးမseesဝါဒပေးသည်” ဟုဆိုသည်။ ငါကပိုသဘောတူနိုင်ဘူး
အဆင့် ၄: ရွှင်လန်းမှု
ငါမှတ်မိတယ် မှတ်ချက် ကောင်းသော 'virtual သူငယ်ချင်း' မှခဏပြန် William ဘယ်သူက“ ခရစ်ယာန်တွေဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့လိုသလဲ” လို့မေးခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီအကြောင်းကိုအများကြီးစဉ်းစားခဲ့ရသောကြောင့်, ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားဘူး။ သူမှန်ခဲ့တယ် ခရစ်ယာန်များစွာကသူတို့သည်သင်၏ထက်“ သန့်ရှင်းသော” စိတ်ထားရှိကြောင်းကြေငြာသည်။ ဝီလျံသည်ဤကိစ္စအပေါ်ရှေးရှေးစိန်ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ခံခြေထောက်ပေါ်တင်လိုက်ပါကသင်အဘယ်ကြောင့်ရှိနေသည်ကိုအဖြေပေးရန်ပြင်ဆင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းလူများအားသိစေချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခရစ်ယာန်ဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲတစ်နေ့ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ့ဘဝမှာအကူအညီလိုတယ် ငါကြင်နာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်ကိုဂရုစိုက်သူ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြုံးပြခြင်း (သို့) သူတို့၏ဘ ၀ များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်သည်။ ခေါင်းမာတဲ့ရောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေစဉ်သို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းများ၌ပြtroublနာရှာနေသည့် bug တစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ပုံကြီးကိုမေ့ပြီးစကားလုံးအနည်းငယ်ပြောရန်လွယ်ကူသည်။ ငါ့ကိုခက်ခက်ခဲခဲပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေကိုဒေါသထွက်ဖို့ငါအရမ်းလွယ်တယ်။
ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောသင်ကြားမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ (အကန့်အသတ်ဖြင့်) အမြင်ကထိုအခြားကုမ္ပဏီမှလူများသည်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ သူတို့ကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်၏သည်းခံခြင်းနှင့်လေးစားမှုကိုရထိုက်ကြောင်းပြောပြသည်။ ငါကခရစ်ယာန်ပါလို့မင်းကိုပြောရင်ငါဟာဟန်ဆောင်သူဖြစ်တဲ့အခါဝေဖန်မှုကိုခံနိုင်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်သူတစ် ဦး (မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော) ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်ကဲ့သို့မဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်မျိုးမရှိသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်အားလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အဆင့် (၄) ကိုတွက်ထုတ်နိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤကမ္ဘာကိုအလွန်ပျော်ရွှင်သောလူတစ်ယောက်မှစွန့်ခွာပါမည်။ ငါဟာစစ်မှန်တဲ့ ၀ မ်းမြောက်မှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်။ ငါဟာတခြားလူတွေမှာဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းက၎င်းသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောပြသည် လိုချင်တပ် ငါ့ကိုရန်ရှိသည်။ ငါသိတာကအဲဒါကိုယူဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်အကျင့်ဆိုးတွေကိုစွန့်ပြီးငါတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းဖို့ခက်တယ်။ ငါမူကား၊
ဒီဟာကမင်းအတွက်နေရာသိပ်မများလွန်းဘူးလို့ငါထင်တယ် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုပြventနာများကိုအနည်းငယ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လိုအပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာရေးသားခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကလည်းသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်!
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြချက်များကျွွောငာခွငျးslideshareဆလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်းမူဝါဒများငန်းနက်wp_footer ပါwp_ ခေါင်း
Blog-Tipping: Catalyze၊ ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံး ၀ င်သောကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခု
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 45
အလွန်ကြီးစွာသောပို့စ်! တဖန်ငါမိတ်ကပ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောမိဘမဟုတ်ကြောင်းသိရတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ ငါ့သမီးကမျက်ခုံးသည်သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ သူမခွင့်မပြုသည့်အခါသူမဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာ“ ရရှိသည်” ဆိုတာအံ့သြစရာပဲ။ 🙂
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 04
Eyeliner သည်ဖခင်၏အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်သူ၏ရန်သူဖြစ်သည်။ 🙂
မိတ်ကပ်ဟာချောစောင်းလို့ထင်ပါတယ် ငါဟာမိတ်ကပ်အများအပြားရဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ငါ့သီအိုရီကမိန်းမတွေဟာသူတို့ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကိုတန်ဖိုးမထားလို့ပိုပိုပြီးသုံးကြတယ်။ ဒီတော့… အကယ်၍ မင်းက ၁၃ နှစ်ဆိုရင်၊ သင်အသက် ၃၀ ရောက်တော့ Picasso နဲ့တူတယ်။
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 54
ငါသဘောတူတယ်။ ငါ Heartland ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Crystal Heart Awards gala အတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်နေစဉ်ငါ့သမီး၏မျက်လုံးကျွမ်းကျင်မှုသည်ယနေ့ညတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်သည်“ မှားယွင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း” ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးအရသာကိုကြည့်ပြီးအရသာရှိရှိဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးသောပရိသတ်မဟုတ်ပါ၊ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ Trowel ဖြင့် ၀ တ်ဆင်သောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့အောက်ရှိလှပသောခ /bများကိုရပ်တန့်သင့်သည်။ မင်းရဲ့သမီးကိုအလှတရားကဘာလဲဆိုတာသင်ပေးဖို့မင်းအတွက်ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 53
wow ဘာ post ကို Doug! မင်းရဲ့သဘောထားကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်
မိသားစုနှင့်လူမှုရေးတန်ဖိုးများနှင့်ပတ်သက်လျှင်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာသည်အလွန်တရာထပ်တူကျနေသည်။ သင်ယုံကြည်သည်မှာသင်ယုံကြည်သောအရာများစွာသည်အစ္စလာမ်၏သင်ကြားမှုများစွာကိုပုံသက်သေဖြစ်စေသည်။ သင်နှင့်တူသောမွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူများသည်အချို့သောမွတ်စ်လင်မ်များထက်အစ္စလာမ့်စံနှုန်းများကိုသရုပ်ပြရန်ပိုကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ကြသည်မှာရယ်စရာပင်။
ဒါကြောင့်ဒီအတွက်သင်တို့ကိုငါနှုတ်ဆက်သည်။ အပြုသဘောထားထားပါ။ မင်းက blogger ကောင်းတစ်ယောက်၊ မင်းငရဲလိုဖခင်တစ် ဦး လိုအသံလိုမျိုးသေချာတယ်။
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 18
သင်ပြောတာကရယ်စရာပါ။ ငါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်သူငယ်ချင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုဝေးတိုင်းဘာသာတရားများအကြားတူညီချက်များစွာတွေ့ရှိရသည်။ မင်းရဲ့ချီးမွမ်းမှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါဟာတတ်နိုင်သလောက်မိဘကောင်းတစ်ယောက်လိုမထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားနေတယ်။
ဂျိမ်း Chartrand - JCM Enterprises
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 25
ဒါကိုပြောရတာဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီ post ကအကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ကြောင့် - ပယ်ဖျက်ခြင်း (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်ကိုဆွေးနွေးထားပါတယ် -
၁။ ဒီဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်တစ်ခုပါ။ မင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေထည့်ပေါင်းရတာကောင်းပေမဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းရှည်လျားတဲ့ရေးသားချက်ကငါ့ကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်။
ငါ့ကိုအမှားမလုပ်နဲ့ ဘာသာတရားကကောင်းတယ်။ မင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းငါလေးစားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာသာတရားကပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါ။ စီးပွားရေးဘလော့ဂ်ပေါ်မှာနေရာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တကယ်မထင်ပါဘူး။ ငါဘာသာတရားအကြောင်းဖတ်ချင်ရင်ဘာသာရေးအမြင်တွေရှိတဲ့ဘလော့ဂ်တွေကိုငါမှာယူမယ်။
၂။ မကောင်းသောအဆင့်များကျော်တွင်တစ်နေ့လုံးငိုနေသောဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ် ဦး အကြောင်းရေးသားခြင်းကကျွန်ုပ်၏အစာအိမ်ကိုနာကျင်စေသည်။ ကလေးကစိတ်မပျက်ဘူး၊ မင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသူကြောက်မှာပဲ။
၃။ ကလေးငယ်တစ် ဦး အားသူမတစ်နေ့လုံးငိုပြီးသည့်နောက် (ပုံမှန်သာမန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်သော) သူငယ်တန်းမှအပြစ်ပေးခြင်းအတွက်အရေးယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ ပင်နာကျင်စေသည်။ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိတဲ့အခါနောင်တမရခဲ့ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုအပြစ်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်မိရင်၊ အဲဒါကိုသဘောပေါက်လာတယ်၊ သင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေရင်၊ အဲဒါကိုထားခဲ့ပါ။ မိန်းကလေးကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါစေ။ သူမဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူမကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ။ သူမအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုကြောက်နေသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 30
စာရေးဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်ဟုခံစားရပါက၊ သင်သွားတွေ့သည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများကိုကျွန်ုပ်၏လက်မှုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ချက်များကိုစာဖတ်သူများအားပြောပြရာတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်းရှိပါသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်၏စာဖတ်သူများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုမျှဝေပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ငါလုပ်တယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာမူများကိုကျွန်ုပ်၏“ Homefront” အမျိုးအစားတွင်ထားပါ။ သင်ဖတ်လိုလျှင်ဖတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့်အဖြစ်အပျက်အပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်လေးစားပါသည်။ ငါ့သမီးကိုဘယ်နေရာမှာမှမချုပ်ထားရသေးပါ၊ သူမမှာ setup တော်တော်များများရှိတယ်၊ ဆဲလ်ဖုန်း၊ mp3 player၊ ကွန်ပြူတာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစသည်ဖြင့်ပေါ့။ သူမငါ့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုတာမင်းကိုအာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။ သူမကကျွန်မကိုစိတ်ပျက်စေမယ်လို့ထင်ရင်သူစိတ်ဆိုးလာမှာဖြစ်ပေမဲ့ကေတီကိုတော့ကြောက်စရာအကြောင်းတစ်ခါမှမပေးခဲ့ပါဘူး။
၁၃ နှစ်အရွယ်မှာသူမကိုမိတ်ကပ်ဝတ်ခွင့်ပြုသင့်တယ်မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်သူမလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပေးဖို့ငါကြိုးစားတယ်။ သူမကပြသနိုင်တာကိုသူပြတဲ့အခါသူကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှနယ်နိမိတ်မျဉ်းမချဘူး။ သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဤအခြေအနေသည်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသင်သိသည်။
မင်းငါ့ကိုပတ်ပြီးငါ့ကိုသိကျွမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာအချက်အလက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်၊ ငါစက်မှုလုပ်ငန်းမှာငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမျှဝေချင်တယ်။
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 28
တရားမျှတသော Doug ။ ကျွန်ုပ်တွင်စီးပွားရေးဘလော့ဂ်တစ်ခုလည်းရှိပါက“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလှုပ်ရှားမှု” ဟုခေါ်သည့်အမျိုးအစားနှင့်အတူတူပင်ပစ္စည်းမျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီဆိုက်ရဲ့အပြင်အဆင်နဲ့လွှမ်းခြုံမှုတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလော့ဂ်လို့ထင်မြင်စေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသည့်အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ငါကနေဒါလူမျိုးပေါ့၊ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုကဘာသာရေးကိုပိုပြီးတိတ်ဆိတ်တယ်၊ ငါတို့အိမ်နီးချင်းအမေရိကန်တွေထက်များတယ်။ အတော်များများကအတော်လေးအစွန်းရောက်တတ်ကြလေ့ရှိတယ် (ကျနော့်အမြင်အရမင်းကအစွန်းရောက်သူလို့ငါမပြောဘူး) ။ ငါကလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလေးစားတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်လည်းရှိတယ်။ ငါဟာအင်အားသုံးကျွေးမွေးတာကိုမကြိုက်ဘူး။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုအစွန်းရောက်ဝါဒကကျွန်ုပ်ကိုသမ္မာကျမ်းစာဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုအလွန်သတိပြုစေခဲ့ပြီး၊ ဝင်လာသောဆူပူမှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ရေဒါမှာလည်းမြင့်မားသောခံစားမှုအပေါ်သတ်မှတ်ထားပုံရသည်။ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာဒီမှာ thumped မရကြလျှင်, ငါပတ်ပတ်လည်ကပ်လိမ့်မယ်။ မျှတမှုရှိလား။
သမီးတွေအတွက် ... ဆယ်ကျော်သက်တွေအဲဒီလိုလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိထားတာကြားရတာကောင်းတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ပြtroubleနာတွေပိုများလေလေ leash တင်းကျပ်လေလေဖြစ်တယ်။ သူတို့ကလေးတွေကိုလေးလံတဲ့လက်ကိုင်ထားတဲ့မိဘတွေကိုလည်းငါ“ မရ” ဘူး။ ဒါဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁၄ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး ရပြီး ဖြစ်၍ မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်မိတ်ကပ်စွမ်းရည်များနှင့်ဆက်စပ်နိူင်သည်။
သင့်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ post ကိုဒူး - လူရှုပ်တုံ့ပြန်မှုအနည်းငယ် (အဆင်ပြေအများကြီး) ရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှဝေဖို့, ငါသည်သင်တို့ကိုငါပြီးပြည့်စုံသောမြည်းကိုမထင်, ဒူး - လူရှုပ်တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကိုငါ့ post ကိုအပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 24
စစ်ပွဲ၊ ကြွယ်ဝမှု၊ နည်းပညာ၊ ဂီတ၊ ဘာသာရေး…လူတိုင်းလူတိုင်း၏မျက်နှာတွင်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုသောကြောင့်သင်အမည် ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှုပ်ထွေးမှုကိုအလွန်ဂုဏ်ယူမိသည်။ ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်ကစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပြောရင်၊
ငါဗန်ကူးဗားမှာ6နှစ်နေထိုင်ခဲ့အဲဒီမှာ High School တွင်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော့်အမေရဲ့မိသားစုဘက်ကကနေဒါလူမျိုးတွေပါ။ ကျွန်ုပ်၏အဘိုးသည်ကနေဒါတပ်များမှအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကနေဒါ၏ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ပြီးသီချင်းသီဆိုနိုင်ဆဲဖြစ်သည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ကိုမေ့ခဲ့သည်) ။ ကျွန်တော့်အမေကကွီဘက်ကိုဖြစ်ပြီး၊ မွန်ထရီရယ်မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တယ်။
ငါကနေဒါထက်ပိုကောင်းတဲ့ toque တောင်းမနိုင်အမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဟာသ!
21:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 59
၎င်းသည်သင်၏အဓိကသမိုင်းနှင့်တူသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့စာမူကအရမ်းကိုပျော့ပျောင်းနေတယ်။ နေ့စဉ်ပျော်ရွှင်မှုပိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
21:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 20
21:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 55
Xmas for အတွက်သင့်ကိုအမှတ်အသားတွေပို့ပေးပါ ဦး
21:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 21
စိတ်ကူး နှင့်အချို့ Labatts!